नेकपाको सचिवालय बैठक जारी, के-के विषयमा हुँदैछ छलफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेकपाको सचिवालय बैठक जारी, के-के विषयमा हुँदैछ छलफल ?
काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल कम्युजिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बसेको छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको हो । बैठक अहिले पनि जारी छ ।
बैठकमा पार्टी एकतामा देखिएको गतिरोध हल गर्न मापदण्ड बनाएर सचिवालयबाट नै हल गर्ने या स्थायी समितिमा छलफलका लागि लैजाने बिषयमा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । साथै, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा केन्द्रीय सदस्यमा तत्कालीन एमालेबाट ४२ जना टुङ्गो
ट्याग्स: cpn, Meeting CPN